Mmetụta nke Ngwọta Seckwụ uregwọ Nzuzo na Onlinezụ ahịa Ntanetị | Martech Zone
Mmetụta nke Ngwọta urekwụ uregwọ Na-enweghị ongwọ na Shozụ ahịa Ntanetị
Sunday, December 18, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
N'ihe banyere ịzụ ahịa n'ịntanetị, omume nke onye na-azụ ahịa na-agbadata na ụfọdụ ihe dị egwu:
ọchịchọ - ma onye ọrụ ọchọrọ ma ọ bụ na ịchọrọ ihe a na-ere n'ịntanetị.
price - ma ọchịchọ a meriri ma ọ bụ na ọ bụghị ihe ahụ.
Product - ma ọ bụ na ngwaahịa ahụ dị ka akpọsaara, na nyocha na-enyere aka na mkpebi ahụ.
Trust - ma onye na-ere ị na-azụ ihe nwere ike ịtụkwasị obi… site na ịkwụ ụgwọ, nnyefe, ịlaghachi, wdg.
E meriri egwu nke ịzụ ahịa n'ịntanetị na afọ ole na ole gara aga, ọbụlagodi site na ngwaọrụ mkpanaka. Agbanyeghị, ọnụọgụ ndị gbapụrụ n'ụgbọala bụ 68.63%, na-enye ọtụtụ ohere ndị ọzọ maka ndị na-ere ecommerce iji bulie ma melite ahụmịhe ha n'ịntanetị. Onu ahia ndi ahia nke UK jiri of 1247.12 (ihe kariri $ 1,550 US) na 2015 na onu ogugu a na-abawanye!
N'ezie, ọ bụghị onye ọbịa ọ bụla nke tinyere ngwaahịa na ụgbọ ala ahụ ka ekwesịrị ịbụ onye na-azụ ahịa. M na-agakarị a shopping saịtị tinye a ndepụta nke ihe dị ịhụ ihe ngụkọta na ụtụ isi na mbupu ga-… mgbe ahụ, m ga-alaghachi mgbe mmefu ego bụ n'ebe ahụ na-eme ka n'ezie zuo. Mana n'ime ọnụego agbahapụ ahụ, ọtụtụ hapụrụ naanị n'ihi na ha ahụghị saịtị ahụ ntụkwasị obi.
Ndị ahịa chọrọ usoro ịkwụ ụgwọ dị nchebe, ngwa ngwa ma dịkwa mfe, dị ka akọwapụtara na animated infographic dị n'okpuru. Zere nchegbu banyere nchekwa ịkwụ ụgwọ na ogologo oge na nke mgbagwoju anya, ma mechaa họrọ ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ siri ike maka azụmaahịa gị n'ịntanetị nke ga - enyere aka na ndị ahịa nwere obi ụtọ! Lelee Total nhazi nke infographic n'okpuru, The Online Shopper si Saga: Na Search nke a urekwụ uregwọ Seckwụ Solgwọ Ngwọta.
Na mgbọrọgwụ ya bụ gị ugwo nhazi. Ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa malitere ịchọpụta na saịtị ọhụụ ma ọ naghị eche na ọ bụ ntụkwasị obi ma ọ bụ na ọ gbagwojuru anya, ha agaghị etinye ihe egwu ịbanye na ozi kaadị akwụmụgwọ ha. N'ezie, nchegbu gbasara nchekwa ịkwụ ụgwọ na-ebute 15% nke ụgbọ ibu azụmahịa gbahapụrụ na saịtị ecommerce. Ha ga ahapụ ma chọta ngwaahịa ahụ na saịtị ọzọ. Gị osompi si saịtị pụrụ ọbụna ịbụ ihe dị oké ọnụ… ma ọ bụrụ na ha na-ọma, ha ga-emetụta na-akwụ ụgwọ a ole na ole mmezi dollar.
Total nhazi na-egosi 4 isi atụmatụ na-eme ka ike ịkwụ ụgwọ ọnụ ụzọ ámá
Zọ ịkwụ ụgwọ na-enye ndị ahịa ọtụtụ ọtụtụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ.
Zọ ịkwụ ụgwọ na-enye onye ahịa ahụ ihe ọtụtụ ngwá ọrụ ịzụ ahịa ịgbasa onyinye.
Zọ ịkwụ ụgwọ nwere ike njikwa ihe egwu na igwu wayo dị ka ntọala nke ikpo okwu ya.
Paymentzọ ịkwụ ụgwọ na-aga n'ihu hapụ onyinye ọhụrụ nke ahụ na-agbanwe na azụmahịa ịntanetị na-agbanwe agbanwe.
Tags: gbahapụrụ ọnụegonkezi ejiri n'ịntanetịmgbanwe ntụgharịKoodu dereecommerceọnụ ọgụgụ ecommercenkwupụta ebupuigwu wayoọnụego mgbanwe ụwaịzụ ahịa n'ịntanetịnhọrọ ịkwụ ụgwọịkwụ ụgwọ ụgwọnjikwa ihe ize ndụụgbọ ibu azụmahịaịzụ ahịa ịzụ ahịa gbahapụrụna-emefu ego n'ịntanetịngụkọta nhaziukUnited Kingdom
SocialReacher: Gini bu mgbasa ozi ndi oru Social Media?